ပြည့်စုံ: July 2009
Pyae Sone | 8:51 PM | ကျေးဇူးတင် မှတ်တမ်း
ကျနော်အရမ်းချစ်ရတဲ့ ကျနော့်ချစ်သူလေးရဲ့မွေးနေ့မှာ တခြားသူတွေရဲ့မွေးနေ့တွေလို ဘာအစီစဉ်မှမရှိ… သုံးဆောင်ဖို့ ဘာစားစရာမှမပါဘဲ မွေးနေ့ဆုတောင်း ဆုမွန်ကောင်းများ ပေးခဲ့ကြသော သူငယ်ချင်း ညီအစ်ကို ညီအမမောင်နှမများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ မွေးနေ့ရှင်ကလည်းပြောပေးပါတဲ့ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့မှာ မွေးနေ့ဆုတောင်း ဆုမွန်ကောင်းများပေးခဲ့ကြသော အစ်ကို၊ အမ၊ ညီမ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း နောက်ပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတွေ ဖတ်ပြီးအတိုင်းမသိ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မိပါကြောင်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမသိကြပေမယ့် ရင်းနှီးပြီးသား ခင်မင်ပြီးသူတွေလိုခံစားမိပါကြောင်း ပြောပေးပါတဲ့… ကျနော်က ပိုပြီး ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျာ… :) :) ;) ကျနော့်အတွက်ကျနော့်ဘက်ကနေ ၀ိုင်းပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြလို့။ မွေးနေ့လေးကို ကမန်းကတန်းလေးနဲ့မို့ ဧည့်ခံဖို့အစီအစဉ် မပါတာကို အနူးအညွှတ်တောင်းပန်ပါတယ်… နောက်မှ သီးသန့်ဧည့်ခံမယ် တပေါင်းတည်း .... :) :) ;)
မွေးနေ့ဆုတောင်းများအား အမှတ်တရအဖြစ် ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်….။
WWKM, July 11, 2009 6:02 AM
မောင်ပြည့်စုံရဲ့ချစ်သူလေးမွေးနေ့မှာ စိတ်ချမ်းသာခြင်း ၊ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီး ....ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေးဖြစ်နိုင်ပါစေလို့....
Git Tuu, July 11, 2009 6:21 AM
ချစ်သူရဲ့ မွေးနေ့ကို သတိတရ ရှိတဲ့သူကို
သူငယ်ချင်းရဲ့ချစ်သူ ကောင်းသောလိုအင် ဆန္ဒတွေရရှိပါစေလို့ .....မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်....။
မမသီရိ, July 11, 2009 6:39 AM
ဒီကလေးနဲ့ ဆို တသက်လုံး ပျော်ရွှင်သွားရမှာ
သူ့မှာ နူးညံ့တဲ့ နှလုံးသား
နားလည်လွယ်တဲ့ နှလုံးသားလေး ရှိနေတဲ့ အတွက်
ညီမလေး တသက်လုံး ပျော်ရွှင်ရမှာပါ॥
ချစ်ပါးလုံး, July 11, 2009 6:53 AM
ကိုပြည့်စုံချစ်သူ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ကိုပြည့်စုံတို့ ချစ်သူနှစ်ဦး ရာသက်ပန် ရိုးမြေကျ မွေးနေ့ကို ဆင်နွှဲနိုင်ပါစေ။
မြစ်ကျိုးအင်း, July 11, 2009 8:38 AM
သူငယ်ချင်းနဲ့လည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဘ၀ခရီး အတူတူ သွားနိင်ပါစေကွာ
သီဟသစ်, July 11, 2009 9:14 AM
Happy Birthday လို့ ပြောပေးပါဗျာ
Honey, July 11, 2009 9:35 AM
ကိုပြည့်စုံရေ ချစ်သူလေးနဲ့အတူ ပြည့်စုံပျော်ရွှင်တဲ့ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ အတူဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့
kiki, July 11, 2009 12:32 PM
အသိနောက်ကျလို့ ပြည့်စုံ ရဲ့ ချစ်သူမွေးနေ့ 
ဆုတောင်းလေး နောက်ကျ သွားတယ် ။
ချစ်တဲ့ သူနဲ့အတူပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ စွာ
တူနှစ်ကိုယ် တိုင်းပြည်လေး ထူထောင်နိူင်ပါစေ လို့ .....
zweminhtun, July 11, 2009 12:33 PM
ပြည့်ချုံ ပြည့်ချုံ မချစ်မနှစ်သက်သူနဲ့အတူနေရခြင်းသည်လည်းဒုက္ခ
ဆန္ဒနဲ့ဘဝ တစ်ထပ်တည်းမကျခဲ့ရင် ဘဝနောက်ဆန္ဒလိုက်နိုင်ပါစေကွာ
ရွှန်းမီ, July 11, 2009 2:49 PM
အစ်ကိုပြည့်စုံချစ်သူရဲ့မွေးနေ့မှာ နှစ်ယောက်လုံးအတွက် အမှတ်တရပေါ့..
ပျော်ရွှင်စွာ အမြန်လက်တွဲနိုင်ပါစေး-)
ချမ်းလင်းနေ, July 11, 2009 3:46 PM
နောင်...သာယာတဲ့ကမ္ဘာလေးမှာချစ်သူနှစ်ဦး ပျော်ရွင်သော မွေးနေများစွာ ယခုထက်ပို ဆင်နွဲနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပိုအပ်ပါသည်။...ငါဧ။်အဆွေ ဝေါသားရေ။ ငယ်ငယ်ငတော့ဝေါကိုရောက်ဘူးတယ်။အရမ်းသာယာတဲ့မြို့လေးပါ။ဝေါဘူတာကိုတော့မှတ်မိနေသေးတယ်။တွေရတာဝမ်းသာပါတယ်။
ဖိုးစိန်, July 11, 2009 3:54 PM
ဖိုးစိန်, July 11, 2009 3:56 PM
i wish for your beloved girlfriend!!
မေသစ္စာမောင်, July 11, 2009 7:29 PM
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ ညီမလေးရေ..။
ဒီကနေပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်း)
ချစ်သူလေးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့
kaungkinpyar, July 11, 2009 8:41 PM
ပြည့်စုံရဲ့ ချစ်သူလေး ကို ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါလို့ နောက်ကျမှ လာပြောသွားပါတယ်
နွယ်ရိုး, July 11, 2009 8:48 PM
ဒေါ်ကောင်းကင်ပြာနဲ့အတူ နောက်ကျမှ ပြောသွားပါသည်၊း)
အလွမ်းပြေ, July 11, 2009 8:49 PM
ကိုပြည့်စုံရဲ့ ချစ်သူလေး မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကံကောင်းခြင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ပျော်ရွှင်ပါစေ..
ချစ်သူကို တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ ကိုပြည်စုံလည်း ချစ်သူနဲ့အတူ ထာဝရ ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်..
မယ်ကိုး, July 11, 2009 11:02 PM
မွေးရက်နည်းနည်း ကျော်နေပေမယ့် ကိုပြည့်စုံရဲ့ချစ်သူလေးအတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါရစေ...
ငှက်ကလေး, July 12, 2009 1:16 AM
ဝေးးးး အတော်ပဲဗျိုးးး များမွေးနေ့လဲ ရောက်တော့မှာ မွေးနေ့လက်ဆောင် အဲဂလိုလေး ပေးမလား ခိခိ
စ တာနော် တကယ်ပေးချင်လဲ စိတ်ဆိုးဘူးရယ်
မွန်, July 12, 2009 4:58 AM
ရင်ထဲက မေတ္တာ စေတနာကို မြင်နေရတယ်
ချစ်သူလဲ ကိုကြိးပေးတဲ့ ဆုအတိုင်း ပြည့်စုံပါစေလို့ မွန်ကထပ်ဆိုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်
နွေးနေခြည်, July 12, 2009 9:36 AM
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ.. ကိုပြည့်စုံချစ်သူရေ...
ကိုပြည့်စုံ ပေးတဲ့စုအတိုင်းပြည့်ပါစေ အမရေ॥
စည်သူ, July 12, 2009 9:52 AM
ကောင်းလိုက်တဲ့ ဆုတောင်း ကဗျာလေးပါဗျာ॥။
လသာည, July 12, 2009 10:13 AM
မွေးနေ့လက်ဆောင်ကဗျာလေး ကောင်းတယ်နော်။ မွေးနေ့ရှင်နှင့် ကိုပြည့်စုံ နှစ်ယောက်လုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေကြောင်းနှင့်တူနှစ်ကိုယ် အမြန်နီးစပ်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ခင်မင်စွာဖြင့်
Mhu Darye, July 12, 2009 10:51 AM
ဒါ ၂ကြိမ်မြောက် ဆုတောင်း ဖြစ်သွားပြီ...ရေးခဲ့ ပြောခဲ့တာတွေ မထင်လို့ ...ထပ်လာရေးပါတယ် ။
္ကဤချစ်သူ ၂ယောက်အား ဘုရားသခင် ကောင်းချီး ပေးပါစေလို့....း)
မေတ္တာရောင်ပြန်, July 12, 2009 8:38 PM
မောင်လေး ချစ်တဲ့ ချစ်သူရဲ့ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ကြပါစေလို့ မကြီး ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ကဗျားလေးကိုလည်း ခံစားသွားပါတယ်။ ချစ်သူအတွက် အခုလိုအမှတ်တရလေး ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ မောင်လေးကိုလည်း လေးစားပါတယ်။
ahphyulay, July 13, 2009 6:06 AM
ချစ်သူတဲ့ ဗျာ... သိပ်နုတာပဲ၊ နုနုရွရွလှလှလေးတွေ
မိစေပဲ အမြဲတန်း အပြုံးတွေနဲ့ ပဲ ခရီးဆက်နိူင်ကြ
ပါစေ...။ လာလည်တဲ့ အတွက်လဲ ကျေးဇူးကမ္ဘာ
လောက်ကို တင်ပါတယ်လို့ ...
မေကဆုန်, July 13, 2009 6:56 AM
အစ်ကိုရေ မွေးနေ့ဆုတောင်းနောက်ကျသွားတဲ့ အတွက် ဆောရီးပါ..
အစ်ကိုရဲ့ ချစ်သူလေး မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပြီး လိုအင်များ ပြည့်ဝကာ အစ်ကိုနဲ့ တူတူ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကိုဖြတ်ကျော် နိုင်ပါစေ
မေလေး, July 13, 2009 8:34 PM
ငါမအားလို့ ဘယ်မှမရောက်ဖြစ်ဘူးဟယ်။ နောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါ။
အပေါ်က အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေ ပေးသွားတဲ့ ဆုတွေ အကုန်ရပါစေ။
ညီမလေးအပေါ် ချစ်ခင်ကြင်နာ ညှာတာတတ်တဲ့
ညီမလေးရဲ့ ချစ်သူပြည့်စုံနဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ တွဲလက်များမြဲနိုင်ပါစေကွယ်။
လောကမှာ ကိုယ်အပေါ်တန်ဖိုးထားချစ်တတ်တဲ့ ချစ်သူနဲ့ ဆုံဆည်းရတာလဲ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါဘဲ ညီမလေး။
ပြည့်စုံရေ ချစ်သူကို ချစ်တတ်တဲ့ တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့
နင်နဲ့ နင့်ချစ်သူ ညီမလေး ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါစေနော်။
ချစ်သူမွေးနေ့ကို ကိုယ်ကလုပ်ပေးလို့ ချစ်သူကတန်ဖိုးထား အသိအမှတ်ပြုခံရတာ ကြည်နူးဖို့ တကယ်ကောင်းတယ်ဟယ်။ငါကော့မန်က ရှည်သွားပြီ။
တကယ်ကို ကြည်နူးဝမ်းသာမိတယ် သူငယ်ချင်း။ နောက်နောင့် မွေးနေ့တိုင်းလဲ အတူတကွ ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေနော်။
ဟန်လင်းထွန်း, July 13, 2009 9:36 PM
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ အကို
Khinmarlaraung, July 14, 2009 4:33 AM
အစ်ကို ပြည့်စုံရဲ့ ချစ်သူလေးသို့ ....
"Happy Birthday".....ဒီကနေ့ လေးမှသည်
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် မွေးနေ့ ရှင်လေးအား
အလွန်ချစ်သော အစ်ကိုပြည့်စုံနှင့်အတူ ပြီးပြည့်
စုံသော ဘဝလေးကို အောင်မြင်ငြိမ်းချမ်းစွာ
လေးကနေ ပြောချင်ပါတယ် မွေးနေ့ ရှင်လေး
ရေ။ အစ်ကိုပြည့်စုံရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းတွေက
မွေးနေ့ ရှင်လေးကို ထာဝရ ပျော်ရွှင်စေမှာပါ။
စီဘောက်မှာ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြသော သူငယ်ချင်း မောင်နှမများ....
15 Jul 09, 12:05
စေတမန်: အချိန်အခါရဲ့တန်ဖိုး ကိုဖတ်သွားပါတယ် မန့်လို့မရလို့ ဆီပုံးကဘဲအော်လိုက်ပါတယ်
13 Jul 09, 00:05
အနမ်း: မန့် လို့ မရဖြစ်နေလို့ ဒီကပဲဆုတောင်းပေးလိုက်မယ်နော်။ ချစ်သူနဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးအဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ............
11 Jul 09, 18:40
မမသီရိ: မွေးနေ့လက်ဆာင်လာပေးတယ်နော်း) .. ချစ်သူလေးကို ပေးဖြစ်အောင်ပေး ပေး ပါ..း)
11 Jul 09, 20:41
12 Jul 09, 00:35
kiki: မွေးနေ့ ဆုတောင်း လေး နောက်ကျသွားတယ် .. ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ကြပါစေ ...
12 Jul 09, 22:27
အညာနွေ: ချစ်သူမွေးနေ့ကို အမှတ်ရသလို အမေ့မွေးနေ့ကိုလည်း အမှတ်ရနော်
အချိန် - 8:51 PM
Pyae Sone | 3:39 PM | ကဗျာ | မွေးနေ့အမှတ်တရ
တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်လို့ အမေ့ရဲ့ ဆိုဆုံးမမှုတွေကို
သူငယ်ချင်းလို တိုင်ပင်လို့ရတဲ့ အဖေ့ကို
ငါ့နာမည်ခေါ်တိုင်း လိုက်ရှာနေတဲ့ Kiss me ကို
မှိုင်းညို့ညို့တောင်တန်းတွေနဲ့ ၀န်းရံထားတဲ့ ဇာတိမြေရဲ့အဝေး
ငါ့ကိုချစ်တဲ့ သူတွေရယ် ငါချစ်တဲ့သူတွေရဲ့အဝေး
ကြားယောင်နေတယ် အဖေ့ရဲ့ အသံတွေ
မြင်ယောင်နေတယ် အမေ့ရဲ့ အရိပ်တွေ….
ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀ တထပ်တည်းကျမဲ့နေ့ကို
ဂျူလိုင်(၁၀)နေ့မှာကျရောက်သော ချစ်သူအတွက် မွေးနေ့အမှတ်တရ ကဗျာလေးပါ…။
မိဘကျေးဇူးကို ဆပ်နိုင်ပြီး အလုပ်အကျွေးပြုနိုင်တဲ့ သမီးကောင်းရတနာလေးဖြစ်ပါစေ…
စိတ်ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာမှုအပေါင်းနဲ့ဘ၀လမ်းကို အခက်အခဲမရှိ ဆက်လှမ်းနိုင်ပါစေ…
ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀ တထပ်တည်းကျပါစေ….
အချိန် - 3:39 PM
Pyae Sone | 8:41 PM | poem | ကဗျာ
သောကမကင်းတဲ့မျက်နှာတွေက ငပေလို အသေလို
ဘ၀ ဘ၀တွေ ရှုသွင်း
ဘ၀ ဘ၀တွေ ပြန်ထုတ်
အချိန် - 8:41 PM